Kali Linux 2020.2 dị na isiokwu ọhụrụ maka KDE Plasma | Site na Linux
Kali Linux 2020.2 dị na isiokwu ọhụrụ maka KDE Plasma
una ohuru nke Kali Linux di maka nbudata na oge a ọ na-eweta ọtụtụ ndozi, gụnyere ọkụ ọhụrụ na ọchịchịrị maka KDE Plasma.
Ọzọkwa, Kali Linux 2020.2 ọ na-ewetakwa nbanye nbanye nchara nchara, ebe ndị otu mmepe lekwasịrị anya imeziwanye ntọala na ndebiri.
Ọhụrụ version na-agụnye ọhụrụ atụmatụ na PowerShell, otu kwalitere ya site na netwọk repository na nne na nna ngwugwu.
Ọzọkwa, Kali Linux 2020.2 na-abịa na nkwalite maka ARM, gụnyere nchekwa 16GB nke etinyere na SD Kaadị.
Dị ka ọkwa ọ bụla ọzọ, mmelite a na-abịa na nchịkọta ọhụrụ, gụnyere GNOME 3.36 na Python 3.8, ọ bụ ezie na Python 2 ka na-enye.
“Ugbu a, maka ụfọdụ ngwa ọrụ ndị ka chọrọ ya, anyị enwetaghachila python2-pip. Python 2 eruola na njedebe nke akaghị ma ọ naghị emelite. A na-agba ndị mmepe ume ka ha debe akwụkwọ ha na Python 3. A na-agba ndị ọrụ ume ka ha gbaa ndị mmepe ume ka ha kwaga, Python 2 ga-abụzi ihe mgbe ochie. ”
Kali Linux na-ewetakwa akara ngosi ọhụụ iji mepụta usoro nke sistemụ ahụ, yabụ ị ga-ahụ ọtụtụ mgbanwe na menu na mmemme ndabara.
Ihe onyonyo ohuru ahụ dị njikere ibudata na ndị ọrụ dị ugbu a nwere ike iji iwu ndị a iji wụnye mmelite ahụ:
ikwughachi "ụgwọ http://http.kali.org/kali kali-Rolling isi na-abụghị n'efu onyinye" | sudo tee /etc/apt/sources.list sudo apt update && sudo apt -y full-upgrade [-f / var / run / reboot-chọrọ] && sudo reboot -f
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Kali Linux 2020.2 dị na isiokwu ọhụrụ maka KDE Plasma
Ọhụrụ nke Russia distro, Astra Linux Common Edition 2.12.29, dị ebe a
Alaka ohuru nke sudo 1.9.0 biara ma ndia bu akuko ya